Imba yeBritain yekuvhura chirongwa chemamirioni makumi masere emadhora kuCayman Islands airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Imba yeBritain yekuvhura chirongwa chemamirioni makumi masere emadhora kuCayman Islands airport
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Royal Highnesses yavo, Muchinda weWales uye maDuchess eCornwall, vakagadzirira kuvhura zviri pamutemo Grand Cayman's ichangobva kuwedzerwa Owen Roberts International Airport sechikamu chekushanyira kuCayman Islands kubva munaKurume 27-28, 2019.
Iyo yekuwedzera purojekiti yakawedzera zvakapetwa katatu saizi yezvivakwa zveairport zveGrand Cayman, ichibvumira chitsuwa ichi kuti chigare padyo nevanhu vangasvika mamirioni e2.5 nevafambi vekunze. Nhandare iyi inosanganisira horo yekuwedzera yekuenda, dare rekudya, imba yekutandarira yeVIP, nzvimbo yekudyira, zvimwe zvekugezera, nzvimbo yekutamba yevana, amai nekamuri yemucheche uye mvumo dzakasiyana siyana.
ICIAA inobata uye inoshanda iyo Owen Roberts International Airport (ORIA) muGrand Cayman uye Charles Kirkconnell International Airport (CKIA) muCayman Brac.
Yekuvhura nhandare yepamutemo inouya mazuva mashoma British Airways isati yaenda kune yayo nguva yezhizha musi wa6 Kubvumbi uye inoshanda neMugovera kubva kuLondon Heathrow kuenda kuGree Cayman ichitsiva sevhisi yeSvondo.
Mugovera zuva rekusimuka panguva yezhizha zvinoita kuti zvive nyore kune vashanyi veBritish kutora mukana wezororo regore nekufamba Mugovera kusvika Mugovera kuCayman Islands. British Airways inoshanda nendege dzakananga pavhiki kubva kuLondon Heathrow kuenda kuGree Cayman.